IWCA Affiliates - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
IWCA Affiliates dia vondrona nametraka fifandraisana ara-dalàna amin'ny IWCA; ny ankamaroany dia fikambanana ivon-toerana fanoratana isam-paritra manompo toerana manokana. Ireo vondrona liana amin'ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny IWCA dia afaka mahita ny fomba etsy ambany ary manatona ny filohan'ny IWCA.
Affiliate IWCA ankehitriny
Afrika / Moyen Orient
Alliance afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra
Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra kanadianina / fikambanana Canadienne des centres de rédaction
Fikambanan'ny Ivotoerana Manoratra Eoropeana
La Red Latino Amerikanina sy Centros sy Programas de Escritura
Konferansa ho an'ny mpampianatra manoratra any Colorado sy Wyoming
tapaky ny volana Atlantic
GSOLE: Fikambanana manerantany momba ny mpampianatra literatiora an-tserasera
Fikambanan'ny foibe fanoratana an-tserasera
SSWCA: Fikambanan'ny Ivotoerana fanoratana sekoly ambaratonga faharoa
Tonga Affiliate IWCA (avy amin'ny Fitsipika IWCA)
Ny andraikitry ny fikambanana ivon-toerana Writing Center dia ny fanomezana ireo matihanina amin'ny foibe fanoratana eo an-toerana, indrindra ny mpampianatra, ny fotoana hihaonana sy hifanakalo hevitra, hanolorany taratasy, ary handray anjara amin'ny kaonferansa matihanina any amin'ny faritra misy azy ireo mba tsy ho voarara ny fandaniana amin'ny dia.
Mba hahatratrarana tsara ireo tanjona ireo, ny mpiara-miasa dia tokony, fara fahakeliny, hametraka ireto masontsivana manaraka ireto ao anatin'ny taona voalohany amin'ny IWCA.
Manaova fihaonambe mahazatra.
Ny laharana dia miantso ny tolo-kevitry ny kaonferansa ary manambara daty fihaonambe ao amin'ny famoahana IWCA.
Manamboninahitra voafidy, ao anatin'izany ny solontenan'ny birao IWCA. Ity manamboninahitra ity dia farafaharatsiny mba ho mavitrika ao amin'ny lisitra birao ary hanatrika ny fivorian'ny birao araka izay azo atao.
Manorata lalàm-panorenana apetrany amin'ny IWCA.
Omeo ny IWCA tatitra momba ny fikambanana afakomaly rehefa anontaniana ianao, ao anatin'izany ny lisitry ny mpikambana, ny mombamomba ireo mpikambana ao amin'ny birao, ny datin'ny kaonferansa, ny mpandahateny na ny seho misy, ny hetsika hafa.
Tazomy ny lisitry ny mpikambana mavitrika.
Mifandraisa amin'ireo mpikambana amin'ny alàlan'ny lisitra fizarana mazoto, tranokala, listserv, na newsletter (na fitambaran'ireto fomba ireto, mivoatra araka izay avelan'ny teknolojia).
Mametraha drafitra fiaraha-manontany, mpanoro hevitra, tambajotram-pifandraisana na manasa izay manasa talen'ny foibe fanoratana vaovao sy matihanina ao amin'ny fiarahamonina ary manampy azy ireo hahita ny valin'ny fanontaniana amin'ny asany.
Ho setrin'izany, ireo mpiara-miasa dia hahazo fampaherezana sy fanampiana avy amin'ny IWCA, ao anatin'izany ny fandoavam-bola isan-taona mba handoavana ny vidin'ny mpandahateny fanamafisam-peo (250 $ amin'izao fotoana izao) ary ny fampahalalana momba ireo mpikambana mety hipetraka ao amin'io faritra io ary an'ny IWCA.
Raha tsy afaka mahafeno ireo fepetra takiana voalaza etsy ambony ny mpiara-miasa iray dia hanadihady ny zava-misy ny filohan'ny IWCA ary hanao tolo-kevitra amin'ny birao. Ny birao dia afaka manamarina ny fikambanana mpiara-miasa amin'ny latsa-bato roa ampahatelon'ny maro an'isa.